Indlela Yokuqalisa Linux Nge-Azure, Ingxenye I: I-Basics - ITS Tech School
Indlela Yokuqalisa Linux Nge-Azure, Ingxenye I: Okuyisisekelo
I-Microsoft iye yenza iziphakamiso ezimbalwa ku-Linux kanye neqembu elivulekile lomthombo kuyo yonke imibhangqwana yakamuva kakhulu. Konke kusuka ekusebenzeni i-SQL Server ne-Visual Studio ku-Linux ukuze isebenze igobolondo yangempela ye-Bash e-Windows 10. Ngempela, ngoNovemba ka-2016, i-Microsoft ijoyine i-Linux Foundation njengengxenye yeplatinum. Ngokuningi kwalokhu kungase kungabonakali nakancane ekuqaleni, futhi kusukela kumaphuzu amaningi okubheka okubaluleke kakhulu, isiteji seMicrosoft ukuqonda nokuqinisa ngokuphelele i-Linux-Microsoft Azure. Ngidinga ukwabelana ngengxenye yezizathu eziyinhloko engiziphendulele ukuba ngizinikezele kakhulu ekusebenzeni i-Linux ku-Azure.
I-Linux ingaphezulu kwesidlali somugqa ku-Azure
Lapho ngiqala ukuphenya ngokusebenza kwe-Linux ku-Azure, ngilungele ukudinga ukungena ngendlela entsha yokubhekana nokusebenza ku-Azure. Ngiye ngisebenza (ngokufanele, ngokuvamile ukudlala nge-Azure) kusukela ekuqalisweni kwayo okuvulekile. Ngenza isinyathelo esivela esiteji sesineji kuya esiteji sesisekelo futhi ngisho nasukahlukahluka kwesinye se-Azure ukuze senze izinto ezimbili. Ngangikulungele ukuthuthela ku-Linux ku-Azure.
Iphuma, ngiphatha kabi. Uhlaka lwama-Azure lwakamuva nje-isisekelo salo. Isebenza okufanayo ku-Linux njengoba isebenza nge-Windows, ngokuqondile ngendlela olindele ngayo ushintsho noma umlilo wokusebenza umlilo ukukhokhela inhlonipho encane esiteji esisebenzisa. Ukuze uthembeke, kwakunzima kakhulu ukuzonda.
Esikhathini esiseduze kakhulu isikhathi eside isikhathi eside i-Microsoft ikhiphe ukuthuthukiswa okuphawulekayo ekuqondeni kwabo nezinto eziphathelene nomthombo ovulekile uma konke kuthiwe kwenziwa futhi i-Linux ngokuqondile. Umthombo ovulekile awusatholakali kuwo, singase sithi, ukukhanya okungalungile. I-Microsoft Azure ibonakala sengathi lokhu kuvelele kakhulu futhi kuyona isiteji esikhulu se-Microsoft lapho ukufakwa kwe-Linux kubonakala khona.
Okunye okuqinisekisayo (ukuthi uzozwa kunoma isiphi isingeniso se-Microsoft ku-Azure) ukuthi indawo ethile engaphezulu kwezingu-40 zemishini emisha ebonakalayo eyenziwe ku-Azure yi-Linux ngempela esekelwe. Ngiye ngazisezimbalwa ezimbalwa lapho ziveza ukuthi yingxenye enkulu yemithwalo emisha yokusebenza, noma yikuphi indlela enkulu kakhulu. Cabanga ngeminyaka engu-10 yokubuyisela emuva futhi uveze kuMicrosoft ukuthi izinga eliphawulekayo lomsebenzi omusha endaweni yabo ebaluleke kakhulu kuyoba yi-Linux. Lokho kungaba mnandi, nokho ngilahlekile.
I-Microsoft iye yafika ekuhlanganisweni kwesikhathi sekwephuzile, kodwa konke sekukhona manje. Ukwenza izinsiza ezisekelwe ku-Linux ku-Azure kulula njengokwenza izinsiza ezisekelwe ku-Windows. Konke okubaluleke kakhulu, izinsiza ze-Linux zihlangabezane nokufinyelela ku-Azure nokusebenza. I-Microsoft iye manje ihlanganiswe nabathengisi abaningana abangenakuqondakalayo be-Linux ukuze banikeze iziphathimandla emazingeni, isiteji namahlelo. Abathengi, isibonelo, i-Red Hat ne-Docker inezinkambo ezingenziwa ngaphakathi kwamaminithi ku-Azure. Imisebenzi yomthombo evulekile, isibonelo, i-Redis Cache ne-Chef njengamanje isikhungo senye ingxenye yesakhiwo se-Azure.
Kuyinto enzima kodwa yokwenza futhi iqondise izinsiza ze-Linux ku-Azure
Ubunjiniyela obuyisisekelo ngaphakathi kwe-Azure kwenza i-Linux ibe umdlali ofanayo no-Windows. Isikhungo samafu esikhungo siphuka emakilasini amathathu ayisisekelo: ukugcinwa, ukuhlela nokulinganisa. Amandla namakhono okuphatha amasistimu ku-Azure yi-OS rationalist, okusho ukuthi bazosebenza ngendlela efanayo noma ngabe baqhuba iWindows noma i-Linux.
Into eyinhloko eguqukayo ngempela yiluhlaka olusebenzayo olusebenza kumshini wangempela. Kulungile futhi ngokusobala izinhlelo zokusebenza ezisebenza ngaphakathi kohlaka lokusebenza.
Nge-Azure ungenza iningi lezinsiza ezihlukile ngaphambi kokuba wenze umshini we-virtual bese ubophezela ngokuyisisekelo umshini we-virtual kwizinsiza ezifanele. Ngokufanayo ungenza ingxenye enkulu yemithombo ngokushesha usebenzisa umugqa we-oda noma ukungena. Inqubo iyafana noma ngabe wenza izinsiza ze-Windows noma izinsiza ze-Linux.
Njengoba kushiwo izikhathi ezimbalwa ngingumuntu we-Windows guy, nokho ngiye ngisebenzisa iklayenti le-Linux ukwenza nokwengamela konke ku-Azure okwesikhashana. Njengamanje, ngokwethembeka mina ngokubanzi ngisebenzisa igobolondo le-GUI, nokho ngiye ngisebenzisa igobolondo le-Bash engxenyeni enkulu yokwenza kwami ​​umsebenzi nokugcina imishini ebonakalayo. I-Microsoft inikeza uhlelo lwezinsimbi zomgwaqo, isibonelo, i-CLI noma i-XPLAT CLI uma kungenzeka ukuthi udinga ukuskena, okuvumela ukuba uhlole ngokuphelele i-Azure. Isibonelo, ukwenza umshini wangempela, ungasebenzisa:
vuza vm ukwenza -Q canonical: ubuntuserver: 14.04.4-LTS: yakamuva ...
Ukwakhiwa kwesakhiwo sokusetshenziswa kwezilimi zesigaba esiphambanweni kunengqondo ngempela. Ngiyitholile ngempela isakhiwo sokukhokha samadivayisi we-CLI avamile kakhulu kunamadivaysi we-PowerShell (okuyizinto ezidingekayo zedijithali ye-oda yesimo se-Windows).
Kunezinyathelo eziningi ezingavamile zokusebenzisa i-Linux ku-Azure. Sesha isigaba sesibili salesi sihloko lapho ngizoxoxa ngokubuyisana, ukusabalalisa, ukuphepha nokusebenza. Izifundo ezimbili ezimfushane, ezitholayo ezinikeza isipiliyoni esiwusizo ukuvuka nokusebenza nge-Linux ku-Azure okwamanje kufinyeleleke.
Izitifiketi eziphezulu ezikhokhelwayo ze-15 ku-2017
Usuku Lokusekela Umhlaba - Manje yisikhathi salo sokuthatha i-Pledge